यो दशैंमा किन्नु भो त सस्तो ब्याजमा नयाँ गाडी ? - Aarthiknews
यो दशैंमा किन्नु भो त सस्तो ब्याजमा नयाँ गाडी ?
काठमाडौं । दशैको मुखमा अटो मेला चल्छ । अनि दशैंमा नयाँ गाडी किन्नेको संख्या ह्वात्तै बढछ । परिणामत : नयाँ गाडी खरिद गरेर गाउँघरतिर जाने चलन पछिल्लो समय निकै बढेको छ ।
पछिल्लो समय दशैं तिहारको अवसर पारेर मध्यम वर्गका व्यक्तिले गाडी खरिद गर्ने गरेका छन् । नयाँ गाडी लिएर गाउँघरदेखि ससुराली जानेसम्मका काम हुँदै आएका छन् । मान, शान र प्रतिष्ठाका लागि पनि गाडी खरिद गर्नेको संख्या बढी छ । उनीहरुको सपना साकार पार्ने काम बैंकले गर्दै आएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले गाडी किन्न सस्तोमा ऋण दिँदै आएका छन् । दशैंमा गाडी खरिद गर्नेलाई छुटको समेत व्यवस्था व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले पनि सस्तो ब्याजमा सवारी कर्जा दिँदै आएका छन् । १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा बैंकहरुले अटो कर्जा दिएका छन् ।
पछिल्लो समय रकम अभाव भएपछि बैंकरहरुले सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वको अवसर भन्दै १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा अटो लोन बैंकहरुले दिँदै आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ब्याज दर केही माथि पुर्याएका हुन् । तर, दशैंलाई गरेर उनीहरुले १० प्रतिशत ब्याजदरमै सवारी साधन खरिद गर्न ऋण दिँदै आएका छन् ।
बैंकहरुको पनि पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिने पर्दै आएको छ । सवारी साधन खरिदमा अहिले बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले दिने कर्जामध्ये सबैभन्दा सजिलो र छिटो दिने कर्जा भनेको नै सवारी साधन किन्न हो ।
कुल कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर एकमुष्ट बनाएपछि महिनाले भाग गरेर प्रत्येक महिना कति रकम तिर्ने भनी किस्ताको रकम निर्धारण गरिन्छ । कर्जा रकम र ब्याजसमेत जोडेर हुने कुल रकममा बैंकले बनाउने ईएमआई फर्मुलाले हिसाब गरी किस्ता रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।
सरकारले सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई केही सुविधा थपिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् ।
विलासिताको साधानको रुपमा लिइने गाडी अहिले आवश्यकताको साधान बन्न पुगेकाले पनि गाडी खरिद गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैंमा नयाँ लुगा लगाउनदेखि गाडी खरिद गर्नेसम्मका काम हुन्छन् ।
सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने
भन्सारसँग आम नागरिक साक्षात्कार हुन सकेनन्ः महानिर्देशक दाहाल
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल ११ स्थानमाथि उक्लियो
समयमा काम सम्पन्न नगर्ने दुई ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द